HomeSuuqa kala iibsigaInter Milan oo qarka u saaran inay ka afduubato Liverpool xidiga ay ku ay ku raad joogtay
November 30, 2020 Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha 0
Kooxaha ka ciyaara Serie A, Inter Milan ayaa lagu soo waramayaa in ay qorsheyneyso inay u dhaqaaqdo daafaca dhexe ee Ajax Perr Schuurs inta lagu jiro bishaan Janaayo.
20 jirkaan ayaa 26 kulan oo waa weyn u ciyaaray kooxda reer Holland, 10 kulan ugu horeesay ayuu kasoo bilowday tan iyo bilowgii xilli ciyaareedkan.
Waxa oo soo bandhigay qaab ciyaareed tayada leh xidiga reer Holland taasoo keentay xiisaha kooxda Premier League ka ciyaarta ee Liverpool,waxaa ku haminee in ay lasoo wareegto xidiga marka uu dib u furmo suuqa kala iibsiga bisha Janaayo.
Si kastaba ha noqotee, sida laga soo xigtay Calciomercato, kooxda difaacaneysa Premier League ayaa tartan adag kala kulmi doonta kooxaha ka dhisan Serie A, Inter Milan.
Inkastoo Ajax ay diidan tahay iibinta bartamaha xili ciyaareedka, dalab kasta oo muhiim ah waa in la tixgeliyaa madaama heshiiska Schuurs uu dhacayo 2022.
Kooxaha baacsanaa xidiga waxa ay kula wareegi karaa qiimo gaaraya 27 milyan ginni, Jurgen Klopp ayaana ku farxi lahaa inuu keeno xidiga garoonka Anfield isagoo eegaya dhaawacyada soo gaaray Virgil van Dijk, Joe Gomez iyo Jeol Matip.
Liverpool ayaa sidoo kale isha ku heysa inay u dhaqaaqdo daafac kale oo heer sarre ah Milan Skriniar kaasoo laga soo xigtay kooxda ka dhisan Serie A, Inter Milan marka suuqa kala iibsiga dib loo furi doono bisha Janaayo